Jawaab ku saabsan tafsiirkii uu Sambaloolshe siyaasadda ka bixiyey | Hadalsame Media
Qaraxa dhacay oo la sheegay in lala beegsaday qof caan ah…
Home Maqaallada Jawaab ku saabsan tafsiirkii uu Sambaloolshe siyaasadda ka bixiyey
Jawaab ku saabsan tafsiirkii uu Sambaloolshe siyaasadda ka bixiyey
(Hadalsame) 15 Sebt 2021 – Mudane Cabdullaahi Sanbaloolshe ayaan daawaday oo ka hadlay siyaasadda iyo damiirka ama aan si kale dhahee Anshaxa Siyaasadda.
Mowduuc aad u muhiim ah ayuu soo qaaday waana uga mahadcelinayaa.
Se waxaan u dhigi lahaa si ka duwan.
Siyaasiyiinta qaarkoodna siyaasadda ka hor ayay lahaayeen khibrad shaqo, qaar kalena waxaa u wehlisay mid maamul oo isugu jirta dejin istaraatijiyad, maamul miisaaniyad iyo maareynta Shaqaale iyo wax soo saar. Kuwan dambe waxay hore u qaateen go’aammo saameynaya nolosha iyo horumarka dad ay iyagu mas’uul u yihiin.
Siyaasiga fekeraya, wax isku falaya, dhaarta xusuusan, og in uu xafiiska ka tegi doono,
siyaasaddu waa ay imtixaantaa damiirkiisa, su’aalo badan ayay ku furtaa maskaxdiisa laakiin saameyn kale kuma laha.
Previous articleTOOS u daawo: FC Barcelona vs Bayern Munchen, Chelsea vs Zenit, Malmo FF vs Juventus, Villarreal vs Atalanta – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleXubno ka tirsanaa Sirdoonka Mareykanka oo qirtay inay si qarsoodi ah ugu shaqeyn jireen dal Muslim ah